DailyMail oo warbixin ka qortay dhirtii ugu dambaysay Fooxa caalamka ee Somaliland inay dabar G’o ku dhowyihiin | Berberanews.com
Home WARARKA DailyMail oo warbixin ka qortay dhirtii ugu dambaysay Fooxa caalamka ee Somaliland...
DailyMail oo warbixin ka qortay dhirtii ugu dambaysay Fooxa caalamka ee Somaliland inay dabar G’o ku dhowyihiin
Caal-madow (Berberanews)- Degaanka Caal-madaw oo dhaca buuralayda dhanka bari ka xiga Gobolka Sanaag; waana dhul caan ku ah qurux iyo dhir aad u qiimo badan oo ay ka mid yihiin Fooxa amma dhirta udugga laga sameeyo, balse muddooyinkii u dambeeyey waxa ka soo yeedhaayey daraasado iyo warbixin dhiilo leh oo sheegaya in kaymaha ay ka baxaan dhirta fooxa laga helo ay soo wajahaday khatar keeni karta dabar go’.
Warbixin wargeyska internet lagu daabo ee DailyMail soo saaray oo Maankaab soo xigtay, ayaa faahfaahin ka bixisay dhirtay iyo khatarta ku soo fool leh oo ay ugu badan tahay dadka degaanka oo dhaawacyo u geysta, daryeel la’aan iyo in six ad-dhaaf ah looga ganacsado, maadaama ay kayntan tahay meesha ugu dambaysay ee adduunka hadda uu ku sii hadhay fooxu. Warbixinta wargeysku ka diyaariyey waxay u dhignayd sidan;
“Marka lagu noqdo waqtigii hore ee barkaaysnaa (Biblical times), raggu waxa ay ku dhaadhici jireen dhagaxaanta buuralayda Cal-modow ee Somaliland oo dhacda Geeska Afrika, iyagoo baarada uga bixi jiray dhul dhagaxeed aad u badan si ay u raadiyaan dhirta fooxa ee qiimaha badan.
Muuse Ismaciil waxa uu cagahiisa oo uu ku xidhay maryo sii uu isaga ilaaliyo urta fooxu in ay soo gaadho ku korayaan geedka. Waxa uu sitaa bir dhuuban oo uu ku googoynaayo geedka si dheecaankiisu uu ula soo baxo, fooxna uga saarto.
“Aabbahay iyo awoowgay shaqadanay qaban jireen. Waxa aan maqalnay in Nebi Ciise xataa halkan uu yimi,” ayuu yidhi Musse Ismaciil Xasan.
Marka la qalajiyo, kadibna la gubo waxa dhecaanka uu geedka ka soo miirtay soo saaraya qiiq fooxa, kaasoo inta badan lagu shido goobaha cibaadada sida Masaajidada iyo Kiniisadaha adduunka. Udugga fooxu iyo dahabka waxa hadyad loogu geyn jiray boqorada adduunka, balse waqtigan kayta ugu dambaysay ee fooxu ka baxo (Cal-madow) waxa ku soo fool leh khatar aad u badan, maadaama qiimaha fooxu aad u qaaliyoobay sanadadii u dambeeyey oo adduunka oo dhan aad u raadinaayo saliida laga sameeyo dhirta. Gurashada xad-dhaafka ah waxa ay dhirtan ku kaliftay in ay hore u dhintaan oo aanay dib u soo olaan, taasina waxay khatar gelinaysaa ganacsiga qadimiga ah ee fooxa iyo udugga.
“Fooxu waa hadyad Alle siiyey Bina’aadamka, sidaa darteed haddii aynaan ilaalin amma aynaan xanaanayn oo aynaan daryeelin waynu waayeyna,” ayey tidhi Wasiirka Degaanka iyo Horumarinta Reermiyiga Somalilnad Shukri Ismaciil Xaaji Baandare.
Degaanka buuralayda Cal-madow dhacda bartilmaameed ku beegan Gacanka Cadmeed waxa dhararkeedu dhan yahay in ka badan 8,000 fuudh (2,440 meters), waana goobaha ugu muhiimsan Somaliland. Ganacsiga Fooxu shayga labaad ee dakhliga ugu badan ee Somaliland ka soo xarooda ee ku xiga xoolaha nool sida ay sheegtay Wasiirka Degaanka Somaliland Shukri Ismaciil.
Haddaba beerashada fooxu waxa ay ku sugan tahay khatar, inta badana dhirta fooxu waxay ka baxdaa dacalka iyo jambiyada buuralayda, iyadoo inta badana dhirtan ay caan ku tahay in xididadeeda buuraha iska shalwiya ay galaan bahalada hoose, gaar ahaan masasaska khatarta badan.
“Sannad kasta dad baa lugaha ka jaba amma dhinta. Dhibaatadan waa shay caadi iska ah. Waa shaqo aad u khatar badan, balse ma haysano beddel dhaama,” ayuu yidhi Muuse Ismaciil Hassan.
Inta badan marka uduga la soo ururiyo, haweenka ayaa kala ahaddiya, una kala saara midabo iyo xajmiga uu kala leeyahay fooxu. Inta ugu badan ee ugu fiican waxa loo raraa Yemen, Sacudiga, Yurub iyo Amerika. Marka laga yimaado in caraf iyo udgoon ahaan loo isticmaalo, haddana xanjada fooxa waxa laga miiraa saliid laga sameeyo cadar, giriimka maqaarka, daawo iyo xanjo la calaashado.
Lixdii sanno ee u dambeeyey qiimaha fooxa qaydhin waxa uu ahaa mid kor u kacaayey, waxaannu kiloogii kor uga soo kacay $1 ilaa $7, sida ay sheegtay Anjanette DeCarlo oo ah khabiir ku takhasustay dhirta (ecologist), ahna AGaasimaha Goobta Ilaalinta-degaanka ee Cal-Madow (Conserve Cal-Madow) oo ay isku baahaysteen koox u dooda degaanka.
Waxa kor u qaaday qiimaha fooxa bahida fooxa looga qabo suuqyada adduunka, gaar ahaan saliidiisa, gaar ahaan warshadaha waaweyn oo u yaqaana amma u bixiyey fooxa “Boqorka saliida daruuriga” (King of Essential Oils),” ayey DeCarlo tidhi oo hore daraasad uga samaysay dhibaatada ku soo fool leh dhirtan udugga.
Sidoo kale, waxa ay sheegtay DeCarlo in gurashada xad-dhaafka ah ee uduggan iyo tartanka dadka dhoofiya ugu jiraan in ay helaan xaddi badan ay qayb ka tahay dhibaatada kaymahan soo wajahday.
Sidoo kale, gosashada iyo dhaawacyada xad-dhaafka ah ee dhirtan loo geysanaya waxa ay qayb ka yihiin in dhirtan dabar go’I karto, maadaama dadku u si joogto ah sannadkii oo dhan u gurtaan, taasina ay dhirta ka ilaaliso in dhaawacyada loo geystay ay ka soo kabtaan.
“Dhimashadu waxay ku badan tahay dhirta waaweyn. Waxa jira in dhirtan dib u korto si aad ah, balse waxay qaadataa 40 sannadood in dhirtan ay noqdaan kuwo la guran karo oo waqtiga saxda ah laga manaafacaadsan karo,” ayey tidhi DeCarlo.
Wasiirka Degaanka Somaliland Shukri Ismaciil, ayaa sheegtay in ay ka cabsi qabto in taariikhda dhirta fooxu meesha ka baxdo, waxaanay tidhi; ‘Fooxa waxa isticmaali jiray Faraacin halkan yimi, sidaa darteed bal waad qiyaasi karta taariikhda uu leeyahay, waa taariikh qani ah.”
Previous articleNin sheegay inaanu Shaah ka iibiyeen Erdogan oo la xidhay
Next article“Waddani Khiyaamo Qaran Ayuu Sameeyey ” Faysal Cali Waraabe